साइटिका रोगबाट छुटकरा पाउन लागि जान्नैपर्ने घरेलु उपाय - Internet Sansar
Home / Health / साइटिका रोगबाट छुटकरा पाउन लागि जान्नैपर्ने घरेलु उपाय
साइटिका रोगबाट छुटकरा पाउन लागि जान्नैपर्ने घरेलु उपाय
internetsansar October 12, 2019	Health Comments Off on साइटिका रोगबाट छुटकरा पाउन लागि जान्नैपर्ने घरेलु उपाय 328 Views
एजेन्सी । साइटिका रोग सुन्दा सामान्य लाग्ने तर गम्भीर रोग हो । यस रोगमा कम्मरको नसा दुख्छ, जुन कम्मर देखि मुनिको भाग सबैमा असर गर्छ । साइटिकामा कम्मर देखि पाइतालासम्म दुख्ने गर्छ । ढाड दुख्ने समस्यामा जहाँ दुखाई महसुस गरिन्छ , त्यहाँबाट तलको भागमा दुखाई भयो भने त्यो साइटिका हुन्छ ।साइटिकाले दैनिक जीवनमा निकै असर गर्ने गर्छ । यसले गर्दा मानिसहरु दुखाई कम गर्नको लागि औषधि खाइरहने गर्छन् भने हस्पिटलमा गरिएको उपचारले पनि औषधि खाउन्जेल मात्र कम गर्छ । साइटिकाको उपचार घरमै पनि गर्न सकिन्छ । यो उपचार विधिलाई निरन्तर रुपमा अनुशासनमा बसेर अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यो घरेलु विधिमा लसुनको दुध प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
साइटिका उपचारको यस घरेलु विधिमा सुरुमा लसुनका तीन देखि चार केस्रा लिएर त्यसलाई फोक्नुपर्छ । त्यसपछि लसुनलाई राम्रोसंग थिच्नुपर्छ । थिचेको त्यो लसुनलाई रस खेर जना नदिइ, एक गिलास दुधमा राख्नुपर्छ । लसुन मिसाइएको त्यो दुधलाई अब केही छिन उमाल्नुपर्छ । उमालिसकेपछी आफूले सक्ने जति तातो बनाएर पिउनुपर्छ । साइटिकाबाट छुटकारा पाउनको लागि यस दुधलाई छ महिनासम्म हरेक दिन एक गिलास पिउनुपर्छ ।लसुन दुध साइटिका मात्र नभएर अन्य कुरामा पनि फाइदाजनक हुन्छ । यसमा भिटामिन इ, क्याल्सियम लगायतका पोशाक तत्वहरु हुन्छन् । यो लसुन दुधले ग्यास्ट्रिक, जोर्नी दुख्ने समस्यालाई पनि फाइदा पुर्याउँछ । यसको साथै दुध नआएर बच्चालाई स्तनपान गराउन नपाएकी सुत्केरी आमालाई यो दुध पिउन दिनाले दुध आउन सुरु हुन्छ ।
साइटिका रोगबाट छुटकरा पाउन भिडियो हेर्नुसः
Previous महाभारतको युद्धकुरुक्षेत्रमा नै किन लडिएको थियो ?
Next सबै भन्दा धेरै गरिब हुने गर्छन् यी दुई राशिहरु ! यस्ता छन् गरिबी हटाउन अपनाउनै पर्ने उपाय !